डाक्टरले विश्वास जित्न सक्नुपर्छ
Wed, Mar 21, 2018 बुधवार, चैत ७, २०७४
अन्नपूर्ण आइतवार, फागुन २७, २०७४ 955 पटक पढिएको
चिकित्सक र बिरामीबीच आपसमा खुला संवाद, व्यावसायिक व्यवहार र स्वच्छ सम्बन्ध विकास हुनु अपरिहार्य छ। तर एकाध चिकित्सकबाट हुने त्रुटि एवं लापरबाहीलाई नजिर बनाउँदै बिरामीले डाक्टरको सक्षमताप्रति प्रश्न उठाएको देखिन्छ। निजी एवं सरकारी अस्पतालमा हुने चिकित्सकीय त्रुटि तथा लापरबाही दोहोरिन नदिन चिकित्सक र बिरामीका साथै व्यवस्थापन पक्ष र सरकारी निकायबीच उचित समन्वय र सहकार्यको टड्कारो आवश्यकता छ। यिनै स्वास्थ्य सवालमा आधारित रहेर सरकारी एवं सार्वजनिक अस्पताललाई कर्मस्थल बनाउँदै रातदिन बिरामीको गुणस्तरयुक्त सेवाका निम्ति लागिरहेका वरिष्ठ मुटु विशेषज्ञ प्रा.डा. भगवान कोइरालासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का दिनेश गौतमले गरेको संवाद :
चिकित्सक र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धमा के विषयले जटिलता ल्याएको छ ?
चिकित्सक र बिरामीबीच सुमधुर र व्यावसायिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर त्यो सम्बन्धमा जटिलता ल्याउने मुख्यतः चारवटा तत्व छन्। पहिलो– चिकित्सकीय र स्वास्थ्यकर्मीको पाटो हो। चिकित्सकको मात्र नभएर अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तदारुकता र सक्षमताले पनि चिकित्सकप्रतिको धारणामा फरक परिरहेको हुन्छ। समग्रमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट पु¥याइनुपर्ने सम्पूर्ण ध्यान, व्यावसायिक अभ्यास र वैज्ञानिक उपचार विधि हुनु वा नहुनुले पनि ठूलो फरक पार्छ। यी सम्पूर्ण व्यवस्थामा सहजता नहुँदा उपचार पनि कमसल हुन पुग्नु स्वाभाविक हो। यसले पनि चिकित्सक र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धमा जटिलता ल्याइरहेको हुन्छ।
दोस्रो– सबै पक्ष ठीक हुँदाहुँदै पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीच आपसमा उचित र उपयुक्त संवाद नहुनाले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। तेस्रो– सेवाग्राहीले उपचार सेवा बुझ्न सकेको छैन, बुझ्न चाहँदैन वा बुझ्न सक्ने क्षमता छैन भने पनि डाक्टरले भनेका कुरा ग्रहण गर्न सक्दैन। बिरामीलाई सहज वातावरणमा सरल तरिकाले बुझाउने कर्तव्य चिकित्सकको हो। तर बाहिरबाट हिँडडुल गरेको भए पनि कुनै बच्चालाई जन्मजात मुटुसम्बन्धी जटिल रोग भएपछि शल्यक्रिया गर्न ल्याइएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई शल्यक्रिया नगरे पनि मर्ने सम्भावना रहेको अथवा शल्यक्रिया गर्दा पनि मर्ने जोखिम छ भनी चिकित्सकले खुला रूपमा भन्ने हो भने केही समयसम्म अभिभावकले विश्वास गर्नै सक्दैन। धेरै पढेको व्यक्तिलाई बुझाउन केही समय लाग्ला भने अलि नपढेको व्यक्तिले त बच्चा टाठै छ, हिँडिरहेको छ भनेर प्रतिवाद गर्न सक्छ।
चौथो– उट्पट्याङ गर्ने र च्याँखे थापेर अस्पतालबाट पैसा असुल्नेहरू पनि छन्। गुन्डागर्दी गर्नेजस्ता विकृति पनि देखिन थालेका छन्। यी सबै गतिविधिले चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्धमा जटिलता ल्याउन सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्।
दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेर नकारात्मक प्रवृत्ति बढेको त होइन ?
हो, यस खालका विकृति/विसंगति अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधानको आवश्यकता पर्छ। अहिले भएका कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गरी चिकित्सक र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। उपचार गर्दागर्दै आपसमा सञ्चार वा संवाद नभएपछि बिरामी पक्षलाई हानि हुने भयो। जसका कारण बिरामी पक्ष आक्रोशित हुने भयो। उपचार सही तरिकाले गर्दागर्दै पनि त्यसलाई बिरामी पक्षले गम्भीर ढंगले नबुझ्ने समस्या पनि विद्यमान छ।
अस्पताल गएपछि निको भएर घर फर्कनैपर्छ भन्ने एकांकी सोच सेवाग्राहीमा देखा परेको हो ?
कतिपय अवस्थामा डाक्टरका कमीकमजोरी पनि हुन सक्छन्। अस्पतालको व्यवस्थापन वा सिस्टमको कमजोरी पनि हुन सक्छ। बिरामीको गलत बुझाइ वा मनसाय पनि हुन सक्छ। स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीबीच खटपट हुनुमा अर्को पक्ष पूर्वाधार पनि हो। अस्पतालमा पूर्वाधार, उपकरणलगायतका साधन स्रोतको सुविधा हुनेबित्तिकै क्षमता बढ्छ। चिकित्सकले आफ्नो क्षमता, प्रविधि र आफूले दिन सक्ने नतिजाबारेमा समयमै बिरामीलाई प्रस्ट पार्नु विश्वास आर्जन गर्न सकिने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो।
पछिल्लो समयमा भएका चिकित्सकीय लापरबाहीले पनि आपसी सम्बन्धमा संकट उत्पन्न भइरहेको छ नि ?
नैतिकता र कानुनी दायरामा रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ। चिकित्सकले पनि हामीसँग यस खालको प्रविधि र उपचार सेवा छ। यसको प्रयोग गर्दा यस खालको नतिजा निकाल्न सकिन्छ। तपाईंको विचार के छ भनेर सेवाग्राहीसँग सोध्नुपर्छ। अन्यत्र पनि जान सक्नुहुन्छ भनेर विकल्पसमेत नदिई पैसाको लोभ गर्नु हुँदैन। अन्य विकल्प नदिने, तर मै एक्लो हुँ उपचार गर्ने भन्ने खालको सन्देश दिएर काम सुरु गर्ने तर पूरा गर्न नसक्दा विभिन्न खालका विवाद भएका हुन्। छनोट गर्ने अधिकार सेवाग्राहीको हो। सेवाग्राहीले छनोट गरी जहाँ जान्छन्, जाऊन् न त।
सर्वसाधारण जनतालाई निजी अस्पतालमा सेवा शुल्क तिर्न धौधौ पर्छ भने सरकारीमा भीडका कारण समयमै सेवा पाउन गाह्रो छ। स्वास्थ्य सेवामा कसरी सहज पहुँच स्थापित गर्न सकिएला ?
स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच गाह्रो भए पनि असम्भव छैन। गाह्रो किनभने सरकारले सबै रोगको उपचारमा आफैं शुल्क तिर्न सक्नुप¥यो। त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति पनि पुर्‍याउन सक्नुपर्‍यो। स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच गाह्रो छ। सहज पहुँचमा असम्भव भने छैन। व्यवस्थित गर्‍यौं भने सहज पहुँच स्थापित गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य बिमा सुरु भएको छ। बिमाका लागि जनताले पनि बेहोर्नुपर्ने भएकाले पुल पैसा जनताबाट पनि उठ्छ। यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। जनताले निजीमा जानै नसक्ने अवस्था पनि नरहला।
केन्द्रीय अस्पतालहरूमा बढ्दो बिरामीको भीडलाई विकेन्द्रित गर्न कसरी सकिएला ?
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ। क्षेत्रीय वा अबको प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। त्यसले पनि केन्द्रीय अस्पतालमा बढ्दो भीड व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ। जनसंख्यामा आधारित रहेर क्षेत्रगत हिसाबले स्वास्थ्य सेवालाई विकास गर्दै अघि बढाउनुपर्छ। विशिष्टीकृत सेवाका लागि मात्रै केन्द्रीय अस्पतालमा रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यस्तो खालको सिस्टम मिलाउन बाँकी नै छ।
मुटुरोगीको बढ्दो संख्याले बिरामीको पहुँच र उपचारमा केकस्तो चुनौती देखिएका छन् ?
मुटुरोगीलाई उपचार सेवामा पहुँच पुर्‍याउने र विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने चुनौती छ। धेरैजसोमा पहुँच सुनिश्चित पनि भएको छ। उपचार पहुँचलाई काठमाडौंबाहिर पनि विस्तार गरी सुदृढ गराउनुपर्ने खाँचो छ। सेवा भए पनि व्यवस्थित र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। मुटुसम्बन्धी सबै रोगलाई उपचारको दायराभित्र ल्याउने अबको दायित्व हो। प्राविधिक विकासको अवश्य पनि जरुरत छ। जस्तै– ट्रान्सप्लान्ट, एसेस्टिवाइज (मुटुको सट्टा काम गर्ने मेसिन) लगायतका आधुनिक प्रविधिको विकास गर्न जरुरी छ। यी प्रविधि महँगा छन्। यी प्रविधि मुलुकमा कुनै ठाउँमा हुन जरुरी छ।
बुधवार, चैत ७, २०७४ 'नगरबासीकै चाहनामा विकास हुनेछ'
आइतवार, फागुन २७, २०७४ डाक्टरले बिरामीको मनोभावना बुझ्नुपर्छ
आइतवार, फागुन २०, २०७४ 'प्रचण्ड र ओलीको पीडाले देश बदलिन सक्छ'
आइतवार, फागुन १३, २०७४ मन्त्रीहरूमा 'फस्ट' हुने रहर छ
बिहीबार, फागुन १०, २०७४ 'वाम एकता हस्तीहाडका बिछ्यौनामा सुत्न होइन'
बुधवार, फागुन ९, २०७४ 'विकास निर्माण सहज छैन'
मंगलवार, फागुन ८, २०७४ 'एक वर्षभित्र महसुस हुने गरी काम गर्छौँ'
सोमवार, फागुन ७, २०७४ 'संघीयता धरापमा पर्छ भन्नेको आयु सकियो'
मन्‍त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय : यी हुन् ओलीका सारथि
रेशम चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ
गणेश लामाको हातमा कसरी पुग्यो प्रहरीको पेस्तोल ?
तीन अर्ब ६० करोडको संरचना २४ महिनामै ठडियो
चिनियाँ राष्ट्रपतिको आक्रमक भाषण: युद्धका लागि तयार छौँ
७ अर्बको सामानमा भन्सार छली 1009
२०८ विद्यार्थी परीक्षाबाट वञ्चित 374
एक सातापछि नेपालीको शव आफन्तलाई 905
५० वर्षसम्म बनेन चिसापानी-मंगलसेन द्रुतमार्ग 3768
'गलत गर्ने अभिलाषा भए दण्ड भोग्न तयार हुनु' 1300
मापदण्ड बिनै सडक खन्दा फेवाताल संकटमा 648
किन शक्तिशाली बन्दैछन् सी र पुटिन ? 3809
राजनीति, विश्वास र अविश्वास 564
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) टिप्स 515
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कटौती, ४७ बाट २८ मा झारियो 1317
सरकारी विद्यालयमा सीसी क्यामरा 48
एक सय १० पुराना सवारी जफत 367
सुन्धाराको गुलाब मिठाई पसलमा आगलागी (फोटो फिचर) 914
श्रीमान जोगाउन सम्धीमाथि सम्धिनीद्वारा बलात्कारको आरोप.. 3486
राजधानीको सुन्धारामा आगलागी 623
रोबोट सोफिया भन्छिन्: प्रविधिको सहयोगले भ्रष्टाचार हट्छ 1219
नास्टका फुर्सदिला वैज्ञानिक 602
सामसुङ एस ९ र एस ९ प्लस 2342
दुई वर्षीय बालकले ४७ वर्षका लागि लक गरिदिए आईफोन 10760
भोडाफोन र नोकियाको महत्वाकांक्षी ‘मुन मिसन’ योजना 2132
एक शिक्षक: जसले कालोपाटीमा आकृति कोरेर कम्प्युटर सिकाउँछन् 4757